बाइकमा बिन्दासः काठमाण्डौ-हेटौँडा,(घनश्याम शर्मा)
२०६५ साल मार्ग महिनाको तीन गते मंगलबार काठमाडौंमा आजको बिहान पनि सदा झैं धुम्मिएको आकासको घुम्टोसँगै ब्युँझियो । काठमाडौँमा जाडोको शुरुवात भैसकेको छ । हिउँदका दिनहरु काठमाडौंमा एक पछि अर्का अर्थात् हरेक अघिल्लो दिन थप जाडो बोकेर आउने गर्छ । बुढा पाका मानिसहरु भन्ने गर्छन् । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
'उहिले जस्तो जाडो अहिले कहाँ छ र काठमाडौंमा हुस्सु पनि सिमेन्टका पर्खालमा पो ठोकिन्छ । शीत खाली जमीनमा कहाँ पर्न पाउँछ र भएपो ! खाली जग्गा कतै पहिले जसो कठ्याङ्ग्रिने जाडो त हराई सक्यो अचेल'
होला, हुनसक्छ मैले आफूले नभोगेको त्यो जाडोको बखान सुन्दा लाग्छ त्यो समय यो काठमाडौं खाल्डो बेस्सरी चिसो थियो होला अचेल जस्तो थुप्रै जाडो छल्ने प्रबिधि र लत्ता कपडाको विकास भैनसकेको अवस्थामा मानिसहरु निकै नै जाडोले कठ्याङ्ग्रिय होलान् । तिनका हात गोडा जाडोले पट्पट्टी फुटे होलान् । केही त्यस्ता कर्मशील मानिसहरु जो निकै कडा परिश्रम गर्छन् जाडो चिसो नभनेर तिनका हातगोडा फुटेर चीराचीरा परेका अचेल पनि त देख्न सकिन्छ । म २०३९ साल ताका क्याम्पस पढ्दा धेरै पटक बालाजु उद्यानमा अवस्थित बाइसधारामा जाडो महिनामा नुहाउन र लुगा धुन समेत गएको थिएँ । यहाँ सम्म कि पाटन नःटोलमा डेरा गरेर बस्दा बस र टेम्पो गर्दै झोलामा लुगा बोकेर बालाजु पुग्थें र दिनभर तातो घाममा नुहाउने र लुगा धुने काम गरेर साँझ पख डेरामा फर्किन्थें उसबेला सबै धारामा पानी आउँथ्यो । अचेल जस्तो पानीको अनिकाल काठमाडौंले व्यहोरेको थिएन ।
आज हेटौंडा जानुपर्ने योजना मुताविक विहानै झोला मिलाउन थालें । हेटौंडा सरुवा भएर गएको पुग नपुग तीन वर्ष भयो । यस कारण काठमाडौं हेटौंडा धेरै पटक यात्रा गर्नु पर् यो । कहिले कार्यालयकै गाडीमा कहिले सार्वजनिक ुटाटा सुमोु गाडीमा हेटौंडा हुँदै भीमफेदी-देउराली- कुलेखानी- सिस्नेरी- फर्पिङ- दक्षिणकाली हुँदै काठमाडौं । यो रुटमा चार घण्टामा हेटौंडाबाट काठमाडौं यात्रा गर्न सकिन्छ । मन मिल्ने साथीभाइसँग बाइकको लामो यात्रा रमाइलो हुनेगर्छ मेरा निम्ति ।
मित्र कवि अनिल पौडेल र म काठमाडौं गजुरी बाइकमा ओहोर दोहोर गरेका छौँ अझै गजुरी देखि जवाङ खोलासम्मको पृथ्वीराजमार्गको सडकलाई बाइकमा नापेर हिंडेका छौँ । वहाँसँग हिँडदाको अनुभूति अत्यन्त सम्झनलायक बनेको छ धेरै पटक, धेरै ठाउँमा यसरी ।
अर्का मित्र गजलकार ललिजन रावल वहाँसग पनि धेरै ठाउँमा बाइकमा यात्रा गरेको छु । टाढा बाइकमा यात्रा गरेपछि खुला ठाउँमा बसेर हामीले सुख दुःख साटासाट गरेका छौँ । मनका कुरा सुन्ने र सुनाउने गरेका छौँ । कतिपय प्रसङ्गहरु केही यस्तै आत्मीय साथीहरुसँग मात्र ब्यक्त गर्न मिल्ने हुन्छन् जुन हामीले गर्छौं कहिले काहीँ ।
यस पटकको काठमाडौं बसाईंमा म मङ्सीर २५ गते बनेपा धुलिखेल हान्निएँ । पाँचखालसम्म नै तान्निने क्रममा पाँचखाल र धुलिखेलबीचमा बाटोको चौरमा बसेर घामतिर ढाड फर्काएर एक दाना मौसम खाइयो । एक दाना हलुवावेद टर्रो भए पनि खाएर पाँचखाल लागियो । सूर्य पश्चिमतिर तिव्र गतिमा हानिए जसरी म पनि काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको पहाडी रमणीय दृश्यलाई अघाउन्जी आँखामा अटाएर दोलालघाटसम्म पुगेँ र स्वादिष्ट माछाको खाजा खाएर हतार हतार काठमाडौँ फर्किईयो । धन्न बाटोमा कतै बाइकले धोका दिएन ।
अर्को दिन ककनीसम्मको यात्रा गरेर ट्राउट माछा बोकेर हामी दम्पत्ति घर फर्कियौँ । घादिङ रसुवा र नुवाकोटका पहाडहरु थुम्काहरु खोला खोल्सी र पहाडका सिरानमा बसेका आकर्षक गाउँ अनि हरिया जङ्गलको चित्र हाम्रा आँखामा कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसीएकै छ ।
बाइक मेरो जीवनसँग अत्यन्त निकट भएर आएको छ । दैनिक जसो केही न केही दुरी मैले बाइकमा यात्रा गरिरहेको हुन्छु यसर्थ बाइक मेरो जीवनसँग घनिष्ट रुपमा गाँसिएर आएको छ । एउटा अत्यावश्यक साधन । भोजन लत्ता वासस्थान पछि यसले मलाई पछ्याई हाल्छ । हिँड्न दिँदैन पैदल कतै पनि ऊ टक्रक्क आफ्नो सिङ्गो ढाड तेसा्रएर मलाई बोकेर कुदाउन तम्तयार हुन्छ । म सर्लक्क आफ्नो सिङ्गो जीऊ उसैलाई बोकाइदिन्छु र ऊ मेरो गन्त्यव्यतिर कुद्छ । काठमाडौंभित्रका र अन्य छोटा छोटा यात्राहरु दैनिक कार्यबोझ र दैनिकी हुन् ती उतिसारो उल्लेख्य पनि हुँदैनन् र उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन ।
बाइकमा गर्मीमा लामो यात्रा राम्रो हुन्छ । चिसो हावा सरर जीउलाई स्पर्श गर्छ । रोक्दा गर्मी भएपनि हिँड्दा शीतल अनुभव हुन्छ । चिसोमा भने बाइक यात्रा र त्यो पनि लामो यात्रा केही कष्टप्रद हुनेगर्छ । हातका औँला चिसोले कठ्याङ्ग्रिन्छन् जीउ चिसोले कठ्याङ्ग्रीएर असहज हुन्छ केही ता पनि धेरै चिसो स्थान छैन र मौसम धेरै जाडो छैन भने बाइक यात्रा उपयुक्त लाग्छ मलाई । वर्षात् याममा भने बाध्यतामा बाहेक बाइकको यात्रा रोज्दिन म ।
रबरको दुईटा अँकुसे भएको डोरीले बाइकको पछाडी सानो झोलालाई बाँधे । दिउँसोको एघार बजिसकेको छ । नगरकोटबाट उदाएको सूर्य मध्ये काठमाडौंमा देखा परिरहेको छ । म काठमाडौंको ककि्रटको जङ्गललाई विस्तारै पार गर्दै नागढुङ्गा पुग्छु । नागढुङ्गाबाट देखिएको काठमाडौंको दृश्य उकुस मुकुश लाग्छ मलाई । कसरी हरिया फाँटहरुमा ककि्रटका बिसालकाय भवनहरु ठड्याइँदै छन् । विना मापदण्ड र पूर्वाधार विकास भैरहेका अनियमित बस्तीहरुले कसरी उपत्यकालाई साँघुरो बनाइरहेछन् विना योजना थालिएका निजी रियल स्टेटहरुले ठूला ठूला सयौँ रोपनीका हरिया खेतका फाँटहरुलाई चिरा चिरा पार्दै खण्डिकरण गर्दै तीन आने र चार पाँच आने घडेरीमा अनुवाद गर्दैछन् प्रकृतिमाथिको यो निर्मम प्रहारलाई खै काठमाडौंले कहिले सम्म थेग्न सक्ला र ?
टिर्र टिर्र महिला ट्राफिकको इशारा । नागढुङ्गा चेकपोष्टमा मोटरसाइकल इन्ट्रि गराउ । आदेश । म झस्किन्छु ए बा ! मसँग त यो बाइकको कागजपत्र नीलो किताब आदि छैनन् । ता पनि भाग्नु भएन, बाइक रोक्छु र दुई जना ट्राफिक भाइहरुलाई यसरी अनुनय विनय गर्छु वास्तविक कुरो-
'यो बाइक ठेकेदार कम्पनीले कार्यालयलाई सप्लाई गरेको हो । त्यसकारण यसको कागजपत्र सम्बन्धित कम्पनी जिम्मा छ । मसँगबाट अस्ति भर्खर मात्र माँगेर नविकरण गर्नुछ भनेर लिएर गएको हो । एक पटकलाई छाडिदिनुस् गल्ती भो ।'
मेरो यस्तो अनुनय विनयले उनीहरुलाई कुनै प्रभाव नपारेको म बुझ्छु । उनीहरुले मेरो इजाजतपत्र राख्ने र नीलो किताब लिएर आएपछि मात्र फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गर्छन् । म अप्ठेरोमा पर्छु । मलाई हेटौंडा जानुछ नागढुङ्गामा इजाजतपत्र छाडेर जानु फेरि कहिले लिन आउनु आदि समस्या मेरो मथिङ्गलमा फेरो मार्छन् । म उनीहरुबाट उम्किने उपायका बारेमा सोच्न थाल्छु तर मेरो इजाजत पत्र उनीहरुको हातमा छ कानुतः गल्ती मेरो छ सजाय मलाई हुन्छ ।
मैले मेरो परिचयपत्र देखाएँ र भनें -
'भैगो एकपटक छाडिदिनुस् भाई आर्को पटक आउँदा बरु बोकेर आउँछु र तपाइलाई देखाउँछु ।'
'उसो भए दुईसय जरिवाना काट्नुस' एकजनाले च्याठिन्दै भन्यो । म दोधारमा परें के गरौँ कुरा सानो थियो झंझट ठूलै आईलाग्न खोजे जस्तो भयो । मैले थुप्रै ट्राफिकहरुलाई चिनेको थिएँ गजुरी बस्दा र सोचें ती मध्ये मैले कुनै चिनेको नामधारी यहाँको इन्चार्ज रहेछ भने त सानो कुरा मिलि हाल्थ्यो । म निरीह भएर उनीहरुका अनुहारमा हेरिरहें । उनीहरुले अन्य अन्य गाडीका अनुमतिपत्रमा छाप लगाए । अन्य बाइकवालाहरुका इजाजतपत्र र नीलो किताबहरु जाँचे । मैले पुनः सोधें-
ए भाई यहाँको इन्चार्ज को हुनुहुन्छ ?
यो मेरो अन्तिम अस्त्र थियो काम लाग्न पनि सक्थ्यो नलाग्ने सम्भावना उत्तिकै थियो र काम नलाग्दा जरिवाना तिर्नु र इजाजतपत्र छाडेर जानु बाहेक अन्य विकल्प मसँग रहने थिएन ।
………॥ इन्चार्जको नाम सुनेपछि मैले भनें -
'के गरौँ त अब तपाईलाई पनि अप्ठेरो पर्ने भए तपाईँको इन्चार्ज नै भेट्छु नि त'
यसो भन्दा उसले मलाई -
'अब तपाईँहरु नै यस्तो गर्नु हुन्छ भने अरुलाई हामीले कसरी नियम पालना गराउने कागजपत्र नहुने एउटालाई पनि नछाड्नु भन्ने माथिको आदेश छ । अझै तपाइँको त बाहिरको नम्बर रहेछ ।'
उसले यसो भन्दा मैले अब त्यो झंझटबाट उन्मुक्त हुने उपाय नदेखेर भनें -
'उसो भए तपाइँलाई जे उचित लाग्छ गर्नुस् म के भनौँ ?'
यसपछि उसले के सम्झ्यो कुन्नि यत्रोबेरसम्म हातमा समातीरहेको मेरो सवारी चालक अनुमतीपत्र मलाई फिर्ता दियो र म आफ्नो बाटो लागें ।
यस घटनाले मलाई नीलो किताब वा त्यसको प्रतिलिपी नै भएपनि बोकेर नहिँडेकोमा आफैले भोग्नु परेको तनाव सम्झेर दिक्क लाग्यो र आफूलाई तत्कालै सामान्य बनाउने प्रयास गरें । नागढुङ्गादेखि त्रिभुवनराजपथको नौबिसे सम्मको यात्रा धेरैपटक बाइकमा गरेको छु गजुरी बसेको बेलामा । नागढुङ्गादेखि ओरालो झर्दा देखिने नागबेली सडकले झाप्रेखोलालाई धादिङ्ग जिल्ला र काठमाडौं जिल्लाको सिमाना कायम गरेको छ भौगोलिक रुपमा ।
पिपल्लामोडको 'टावर भ्यू रेष्टुरेन्ट' को छेउबाट देखिने धादिङको हिमालको दृश्य अत्यन्त मनोरम देखिन्छ । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसास्वादन गर्न धेरै टाढा राजधानीबाट पुगिरहनु पनि पर्दैन । एक घण्टाको दुरी राजधानीबाट पार गरेर हिँड्दा नै पनि मनै आनन्दित हुने दृश्यहरु आँखाको चारैतिर ठडिने गर्छन् । नागढुङ्गाबाट ओरालो झर्ने बित्तिकै म यस्तो महसुस गर्छु ।
नीलो आकाशमा बादलका एउटा दुईटा टुक्राहरु फाट्टफुट्ट देखिरहेको छु । गाडीहरु उसो धेरै गुडिरहेका छैनन् । राजमार्गहरु कतै न कतै बन्द भएका होलान् । देशमा लोकतन्त्र आएपछि राजमार्गहरुले जस्तो अथाह पीडा अरु कुनै भौतिक संरचनाले सायद भोगीरहेका होलान् ! सानो निहुँमा पनि यातायात बन्द भईरहन्छ । राज्यको उपस्थिति राजमार्गमा निरीह बन्दो छ । राज्यलाई कमजोर संयन्त्रमा रुपमा रुपान्तरण गर्दै हामी बलिया हुने अभ्यास पो गर्दैछौँ कि यस्तो सोच्न थाल्छु म ।
झ्याप्रे खोला ! उफ ! यो ठाउँमा पुगेपछि मेरो मुटु सधैँ चिसो हुन्छ एक पटक । यहाँ हावा पनि उसैगरि चिसो भएर बग्छ । केही छाप्राहरु छन् यहाँ चिया र नास्ता पाइन्छ । उकालोको लगभग सिरान भएकाले तातेको गाडीका रेडिवाटरूमा चिसो पानी थप्छन् ड्राइभरहरु ।
२०५९ सालको वर्षायाम यस झ्याप्रै खोलामा ठूलो विनासकारी भएर आयो । सडकको तलदेखि माथि अर्काे सडकसम्मको भाग पूरै पहिरोमा रुपान्तरण भयो एकै रातमा । खोल्साको छेऊमा छाप्रामा जीवन निर्वाह गरिरहेका एउटै परिवारका आमा बाबु छोरा छोरी बुहारी समेतका पाँच जनालाई पहिरोले पुरेर एउटै चिहान बनायो । घरका जवान मानिसहरुको जीवन त सकियो तर सो छाप्रामै बस्ने सोही परिवारकी माऊ बुढी अन्दाजी सत्तरी वर्ष थिइन उनलाई भने पहिरोले उछिट्याएर पाखामा पारिदियो उनको ज्यान बच्यो !
त्यो नरसंहारकारी पहिरो खसेको भोलीपल्ट मैले डोजर लगाएर पुरिएका लासहरु झिक्न लगाएको थिएँ । यातायात समेत अबरुद्ध थियो । ती बृद्धाले पहिरोको छेऊमा उभिएर डोजरका डर लाग्दा दाँतले आफ्नो परिवारका मान्छेका लास झिकेको दृश्य हेरिरहेको मलाई सम्झना छ । त्यसबेला म अन्यमनस्क अवस्थामा टोलाई मात्र रहेँ । एकजना महिलाको पेटमा आज भोली नै जन्मिने बालक समेत थियो जुन पछि पेट चिरेर निकालेर छुट्टै गाडियो बाँकी पाँच बटा शव छुट्टा छुट्टै झ्याप्रेखोलामा नै चिता बनाएर आगो सल्केपछि म आफ्नो बाटो लागें तर त्यो रातभर म निदाउँन सिकंन राम्रो सँग खाना खान मन लागेन शरीर असामान्य बनिरह्यो ।
यो बाटो हिँड्दा यो घटना सम्झिने गर्छु । नौबिसेसम्म मलाई ओरालो झर्नुछ । मेरो पछि पछि पोखरा जाने एउटा माइक्रोबस छ । अगाडिको सिटमा दुईटा मंगोलियन संभवतः थकाल्नी/गुरुङ्सिनी महिला अनुहार ऐनाबाट हेर्छु । मेरो गती उसकै हाराहारीमा छ । नागढुङ्गाको एकछिनको कचिङ्गलले मलाई केही ढीलो भयो यसकारण पनि म तिब्र गतिमा बाइक कुदाउँछु पचास र साठी किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति । ओरालो छ बाटो फराकिलो भएका कारण सुरक्षित नै महसुस गर्छु ।
कानाकोटबाट तल्तिर झर्छु । सडकको तलमाथि पहेंलपुर धानखेत मन रोमान्चित हुन्छ । बाइकको ब्रेकमा ध्यान छ । आँखा तल र माथिको प्राकृतिक सुन्दरतासँग नजिक हुन खोज्छन् । मनले त घण्टौँ एउटा चौतारीमा बसेर बिताउँ भन्छ । तर लक्ष्य भने काठमाडौँ- हेटौंडाको यात्रा छ । नौबिसे- दामेचौर- टिस्टुङ- पालुङ- दामन- सिमभंज्याङ्ग- झीरघारी - अघोर- लामीडाँडा- महाभीर- चुनियाँ- भैंसे हुँदै हेटौंडा पुग्नुछ । एकसय चालिस किलोमीटर पहाडी बाटोका यात्रा । घाम पश्चिमतिर सर्ने क्रम छ । म पनि सूर्य अस्ताउने दिशातिरै उन्मुख छु । सूर्यका किरण छेक्न कालो चस्मा र हेल्मेटको ुभाइजरु उपयोगी हुन्छ मलाई यात्रामा ।
नौबिसे खाना खाने होटेल रेष्टुरेन्टहरु भएको चोक । गाडीहरु मर्मत गर्ने 'वर्कसप'हरु भएको स्थान । एउटा पूल छ जसले खोलामाथि विजय गरेर गाडी र मानिसहरु तार्ने गरिरहेको छ । त्यो पुलसँगै तल्लोपट्टि पुरानो फलामको पुल थियो यसलाई ुकतै प्रयोगमा ल्याउन पाएु मैले धेरै पटक यस्तो सोचिरहन्थेँ मेरो कार्यक्षेत्र बाहिरको काम मेरो निर्णयबाट नहुने काम मेरो सुझावले मात्र नहुने काम म वर्षौंदेखि यो बाटो हिँड्दा सोचिरहेको काम अहिले हुँदै रहेछ ।
खुशी लाग्यो । प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको यो फलामे पुल धमाधम खोलर पाखामा राखिएको रहेछ सम्भवतः यसले कुनै अर्को खोलामा तेर्सिने मौका पाउँछ होला र मानिसहरुले यसबाट सेवा प्राप्त गर्नेछन् वा यो लिलाम भयो अर्को सम्भावना के भएको होला मलाई भने थाह भएन ।
दामनमा पुगेर खाजा र चिया खाने विचारले नौबिसेमा म अडिन्न । हेटौँडाबाट काठमाडौं आउँदा भने पछिल्लो पटक मैले नौबिसेमा खाजा खाएको थिएँ । भित्ताको ब्नेपालीको होटेल खसीको मासुको निम्ति प्रसिद्ध छ यहाँ । मनकामना जाने आउने र अन्य ठाउँका यात्रीहरु खचाखच खाना र नास्ताको निम्ति यहाँ भरिएका हुन्छन् ।
पृथ्वीराजमार्गको नौबिसे- पोखरा खण्डको ठूलो चौडा सडक नौबिसेबाट तलतिर सलल बगेको लाग्छ गाडी र मोटरहरु बगाउँदै आफ्नो छातीमाथि एक प्रकारको रोचक यात्रा तिव्र गतिको यात्रा गर्न सकिन्छ यो चौडा सडकमा । मलाई भने अब सिमभंज्याङ्ग नपुगुन्जेल उकालो उक्लिनु छ । दुई नम्बर र तीन नम्बर गियरमा कानमा 'एम.पि.थ्री. को हेडफोन लगाएको छु । केही नेपाली केही हिन्दी गीत र गजलहरु सुनिरहेको छु । बाइक चलाउँदै यसरी बिन्दास हिँड्नु हुँदैन खतराको नजिक पुग्न सकिन्छ थाह छ तर पनि लामो यात्रामा एक्लै बाइक त्यसैले बिन्दास गुडिदिन मन लाग्छ बिन्दास भइदिन मनलाग्छ । जीवनका केही क्षणहरु त बिन्दास होऊन् यस्तै सोच्छु ।
नागढुङ्गादेखि हेटौंडासम्मको सडकमा काम गर्ने सबै सडक कामदार र तिनका नाइके सुपरभाइजरहरुलाई म चिन्छु उनीहरु पनि मलाई राम्रोसँग चिन्छन् र हाम्रो बीचमा धेरै आत्मीयता छ । यस्ता केही नामहरु लेख्न र उल्लेख गर्न मन लाग्यो जसको नाम कुनै संचार माध्यममा आउँदैन । अहोरात्र हिँडीरहने गाडीका लस्कर र तिनका यात्रीलाई थाहा हुँदैन् । पहेंलो र हरियो आधा ज्याकेटमा सडकतिर निहुँरिएर सडक सफा गरिरहने यस्ता कर्मशील हातहरुलाई भने मैले बिर्सन सकिरहेको छुँइँन ।
बद्रीप्रसाद भट्ट नौबिसे हरिबहादुर विष्ट सात घुम्ती ज्ञानेन्द्र पालुङ कुमार थपलिया ऋषि थपलिया रुपाखेती हस्त बहादुर अधिकारी हरि घिमिरे कुमार कँडेल नौबिसे- जवाङखोला -धादिङ र चितवन जिल्लाको सिमाना । नौबिसेबाट मास्तिर लागेपछि मेरा आँखाले गौरुङ जेठालाई खोज्छ । पोहोर सालसम्म उसलाई आउँदा जाँदा भेट्थेँ यसपटक भने उसको ठाउँमा एउटा महिला अनुहार देख्छु-
'गौरुङ जेठा खै नि ?' मेरो प्रश्नको जवाफमा महिला अनुहार झस्किन्छ । त्यो अनुहारले धेरै कुरा भन्न खोजेको भान हुन्छ मलाई ।
'विरामी हुनुहुन्छ । त्यसैले काममा म आ कि ।'
तामाङ समुदायको गौरुङका तीन वटा श्रीमति थिए । यो सबैभन्दा कान्छी हो क्यार ! दुईटी मध्ये एउटा मरेको र आर्काे पोइल हिँडेको यस्तै केही भनेको थियो उसले मलाई । ऊ लगभग पचहत्तर वर्ष भयो ! यसपटक ऊ विरामी छ भन्दा मैले त्यो सोझो निरीह र कर्मशील गौरुङ जेठालाई अब धेरैदिनसम्म भेटीरहने आशा मारेर अगाडि बढेँ ।
उमेर पाको भएपनि लगभग सत्तरी टेकेको भवनाथ गोविन्द प्रसाद लामीछानेलाई एकपटक मैले-"तपाईँ बृद्ध हुनुभयो अब युवक मानिस कामदार राख्नुपर्छ तपाइँको सट्टा भन्दा जवाफ दिएको थियो-
'सर काम हेर्नुस् । मैले कुनै तीस वर्षे युवकले भन्दा थोरै काम गरेछु भने त्यति बेला भन्नु होला'
त्यसपछि मैले उसको सट्टा अर्को मानिस राख्ने विचार परिवर्तन गरेको थिएँ र उसले साँच्चिकै कुनै युवाले भन्दा कम काम गरेर देखाएको थिएन ।
छेउमा पहेंलो झण्डा गाडेर ठेलामा माटो ओसार्दै गरेको लामीछाने बुढालाई के छ भनेर सोधें । छोटो भलाकुसारी पछि म सात घुम्तिको उकालो चढ्न थालें । धादिङका गाउँहरु । अग्लो डाँडाका काखमा अवस्थित केवलपुर । थुम्कामाथि झुरुप्प कागको बथान जस्तै खाँदिएका घरहरुको सौन्दर्य बल्लो डाँडाको टुप्पोबाट आँखाले भ्याइन्जेल हेरिरहुँ । हिमालका चुचुरामा टेक्ला टेक्ला जस्तै गरेर हवाईजहाज काठमाडौंतिर उडेको दृश्य मनमोहक देखिन्छ । बादलका टुक्रा छुँला झैं उडेको सेतो जहाज ठूलो चरा जस्तै देखिन्छ ।
यो बाटोमा अत्यन्त कम मात्रामा गाडीहरु चल्ने गर्छन् । भारतीय इन्जिनियरहरुले सन् १९५३को जनवरीबाट शुरु गरेर भैंसे दोभान देखि थानकोट सम्मको बहत्तर माइल सडक सन् १९५६ मा सम्पन्न गरेका थिए । जसको निर्माणमा भारत सरकारको कोलम्बो योजनाले आर्थिक र प्राबिधिक सहायता गरेको लेखोट धादिङ र मकवानपुरको सिमानाको भित्तामा टाँगिएको छ ।
दामेचौरको छेऊमा हरिबहादुर बिष्ट भेटिन्छ । म बाइक रोक्छु ।
'सर चिया खाउँ । आज त म सरलाई चिया नखुवाई कहाँ पठाउँछ र बेला छँदैछ के को चिन्ता उजेलैमा हेटौँडा पुग्नुहुन्छ ।'
उसको आत्मियताले मेरो हृदय आल्हादित हुन्छ । धन सम्पत्ति र पैसाले किनेर पाइने भौतिक बस्तुभन्दा मान्छेले दर्शाउने सदभाव आत्मीयता र सहृदयता कति ठूलो हुँदोरहेछ भन्ने म अनुमान गर्छु । उसको अमूल्य एक कप चिया म पिइदिन्छु । उसले मलाई चियाको पैंसा तिर्न दिँदैन भन्छ- 'म कहाँ सरलाई तिर्न दिन्छु । मेरो ठाउँमा गाउँमा मेरो कार्यस्थलमा मैले एक कप चिया सरलाई खुवाउन पाउनु मेरो अहोभाग्य ठान्छु । तपाईं कहाँ आएको बेला खुवाउनुहोला नि ।'
मलाई थाहा छ ऊ हेटौंडा आउने पनि छैन र मैले उसलाई चिया खुवाएर त्यो आत्मीयता देखाउन पनि पाउने छैन ।
'मैले विहे गरि नि सर ।'
उसको यो भनाइले म छक्क परें । पचास नाघेको उसले किन फेरि अर्को विहे गर्यो उसले मेरो अनुहारको भाव पढेर भन्यो ।
'होइन सर पहिले त छोरीको गरें नि ! त्यसपछि छोराले धेरै कर गर् यो अर्को बिहे गर्नुस् भनेर । छोराकै लागि भएपनि अर्को बिहे गर्नु पर्यो । कुबेलामा श्रीमतिले परमधामको बाटो समातेर दुःख पाइयो नि !'
मैले उसको समस्या बुझें । मोटर साइकलमा बोँधेको डोरी चुँडिएर झोला झुण्डिन थालेकाले उसले छिमेकको पसलबाट एक मुठा ल्पास्टिकको डोरी किनेर झोला बलियो गरि बाइकमा बाँधी दियो । उसको सहयोगले म कृत कृत भएँ ।
अहिले मेरो टाउको माथिको आकाश स्नीग्ध सफा छ । घाम पारिलो छ । म यसबेला धादिङ जिल्लालाई छाडेर मकवानपुर जिल्लामा पुगिसकेको छु । म सँगसँगै दुईवटा अन्य बाइक घरि अघि र घरि पछि गरेर हिँडेको देखिरहेछु । कहिले म ती दुईटा बाइकलाई उछिन्छु कहिले उनीहरु मलाई ।
कतै कतै एउटा दुईटा माइक्रोबस र जीपहरु फेला पर्छन् । दामेचौरको पाखोबाट पारिपट्टि पश्चिमतिरको पाखोमा बसेका वस्तीहरु नियाल्छु । घामको कीरणले तिनका छानामा लगाइएका जस्ता पाता टलक्क टल्किएका छन् । परिश्रमी मेहनती मानिसका अनुहार जस्तै ! श्रम गरेर पनि अनुहार टल्काई रहनु सुखपूर्ण जीवनयापन हुँदो रहेछ । पहिलेको जुग जमाना र पूराना मानिसहरु सँधै टल्किरहेका अनुहार लाग्छन् मलाई तनावहीन जीवन भोगाई ल्पेटोनिक सुख एक प्रकारको भौतिक सुखानभूति भन्दा माथि आत्मिक सुख कठै ! अहिलेको पुस्ताले कहा भोग्न पाउनु यस्तो जीवन ।
घुम्ती अनि मोड क्रमसः घुम्ती अनि मोड पुनः यीनै घुम्ती र मोड हुँदै म टिस्टुङ पुग्छु । पाखोबारी बाटो मुनि मास्तिर जंगल मेलापात गर्ने ठाउँ । कतै बारी कतै करेसो खोल्सो जंगल पानीका मुहान सर्वत्र सबै हेर्दा जीवन यतै गाउँमा सुखमय होला यस्तो सोच्छु म बाइक कुदाउँछुँ हँइय मेरा सोचाइहरु बाइकसँगै बाइककै गतिमा कुद्छन् ।
साहित्यकार मित्र नकुल सिलवाल र विदुर गौतम बाइकमा खुबै नेपाल घुमियो धेरै ठाउँ पुगियो भनेर सुनाउनु हुन्थ्यो । बाइकमा एक्लै बिन्दास िहंड्नु वा दुईजना मिलेर गफिँदै यस्तो बाटोमा गुडिरहनु कुदिरहनु दैनिक जीवनको गति एउटा मीठा अनुभूति हो । मित्रहरु ललिजन रावल र उदय निरौला काठमाडौंदेखि बुटवल भैरहवा हुँदै हेटौंडाबाट यहि बाटो पुनः काठमाडौं फर्किनु भएको थियो । मैले उसबेला वहाँहरुलाई गजुरीमा भेटेको थिएँ र छोटो भलाकुसारी पछि वहाँहरु त्यो दिन चितवन पुगेर विश्राम लिनु भएको थियो ।
बाइक असाध्यै खतरा सवारी साधनहरुमध्ये पर्छ । जीवनमा खतरा बोकेर हिँड्नु खतरा मोलेर हिँड्नु पनि अर्को एउटा खतरा हो ।
टिस्टुङबाट केही ओरालो झर्नुपर्छ पालुङ पुग्न । पालुङ उपत्यकाले नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई तरकारी र खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विशेषगरि पालुङको आलु प्रख्यात मानिन्छ । चिसो उपत्यका ससाना पहाडहरुको फेदिमा अवस्थित यस रमणीय र उर्वर उपत्यकाको प्राकृतिक सुन्दरताको जति धेरै बयान गर्दा पनि कम लाग्छ ।
टिस्टुङमा चिसो बतासले घाँटी र जिउलाई स्पर्श गर्छ । देवदारका रुखहरुबाट निस्केको हावाले एक प्रकारको बासना बोकेर ल्याइदिन्छ नाकसम्म । कटुस र चिलाउनेका रुखहरु सडकतिर मुन्टो फर्काएर नतमस्तक झुकेका छन् । घँगारु चुत्रो र ऐँसेलुका झाङबाट तल र माथितिर कसैको प्रतिक्षामा बाटो कुरेरै बसेका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।
पालुङ खोलाको नजिकको बजार तरकारीका थोक विक्रेताहरु केही खाना र खाजा खाने होटेल दोकानहरु कुनै दैनिक घरायसी प्रयोगमा आउने सामानहरु बेच्न राखिएका किराना पसलहरु ! मानिसहरु गाउँमा तरकारी, घिउ, दूध लगायतका कृषि उपज उत्पादन गरेर यस्ता सडक छेऊका स-साना बजारहरुमा पुर्याउँछन् । ती साना बजारले देशका काठमाडौँ पोखरा आदि ठूला बजारमा ती उपभोग्य बस्तु पुर्याउँछन् । उत्पादक कृषकहरु आफूले बेचेको पैसाबाट चाऊ चाऊ चुरोट रक्सी र अन्य सूर्तिजन्य पदार्थमा धेरै रकम खर्च गर्छन् । गाउँ गाउँमा चाउ चाउ विस्कुट पुगेको छ । भटमास र चिउराको खाजा हराउँदै गएको अवस्था छ ।
मोबाइल र फोनले गाउँबाट ठूलो रकम संकलन गर्छ । पूँजिवादको विकासमा हामी अभ्यासरत छौँ । गाउँहरुमा पनि पूँजीबजार सक्रिय हुन थालेका छन् । सहकारी र समूहहरु पूँजि निर्माणका प्रक्रियाहरु द्रुत बन्दा छन् । पालुङबाट उकालो लाग्छु । पालुङ र दामनको बीचको एउटा रमणीय मोडबाट यो मनमोहक पालुङ उपत्यकालाई अघाउँजी हेर्न मन लाग्छ । मोडमा बाइक रोक्छु । डिजिटल क्यामेराबाट केही तस्बिर उतार्छु । कवि गीतकारमित्र रमेश पौडेललाई सम्झिन्छु । उनलाई यी केही तस्विरहरु विजुली डाकबाट पठाउने विचार बनाउँछु मनमा ।
उत्तर मोहडा फर्किएको यो डाँडा उक्लिँदा उत्तिसको बाक्लो जंगल देख्छु एक ठाउँमा उत्तिसका रुखहरुको बीच बीचबाट घाम टाटे पाटे हुँदै छिरेको छ । बाँकी जंगल ओसिलो छ । देशको जैविक विविधता गमेर मन आल्हादित हुन्छ । यसको पूर्ण सदुपयोग हुँदा कति समुन्नत राष्ट्रमा हामी गनिने थियौँ होला ।
बाटोको छेउमा एउटा गुम्बा छ । गुम्बामा फहराईएका झण्डाहरु रंगी चंगी छन् । यो घना र सुनसान जंगलको बीचमा यसले एउटा छुट्टै शान्ति प्रदान गर्छ बटुवा एवम् यात्रीहरुलाई । त्यो शान्ति एकछिन भए पनि मैले प्राप्त गरेँ यतिखेर ।
यतिखेर म दामन पुगिसकेको छु प्रतिध्वनी एफ.एम.ले गीतहरु बजाईरहेको छ पालुङमा पनि एउटा एफ.एम. स्टेशन छ । हाल देशभर दर्जनौं एफ.एम. स्टेशनहरुले हामीलाई सूसूचित एवम् मनोरंजन प्रदान गरिरहेका छन् । यो एफ.एम. स्टेसनको आडैको होटेलमा मैले खाजा खाने ठाउँ हो । मासु चिउराको लागि भन्छु, एक कप चिया पिउँछु । थकाई केही कम हुन्छ । दिन ढल्दैछ । कानमा गीत बज्छ एउटा मीठो गजल-
"ढल गया चाँद गई रात चलो सो जायँ
हो गई उनसे मुलाकात चलो सो जायँ ।"
यतिखेर दिन ढलेर रात परे पनि मैले आफ्नो गन्तव्य पुग्नै पर्छ सुत्नको निम्ति । यस्तो सोचर गुनगुनाउँदै अघि बढ्छु ।
सिमभंज्याङ्ग दुईजहार चारसय अठासी मिटरको उचाईँमा छ । मलाई त्यहाँसम्म उक्लिनु पर्छ । त्यसपछि ओरालो झर्ने क्रम शुरु हुन्छ । 'पानोरमा' होटेलको मोडमा एउटा जर्मन रेसिङ कार बिग्रेको छ । मेकानिकहरु कार बनाउन तल्लीन छन् । यस्ता पूराना मोडेलका कारहरुको र् याली विश्वभ्रमणमा नेपाल आइपुगेका थिए भुटानबाट केही दिन अघिमात्र छेऊमा एउटा ल्यान्डरोभर जीप छ । ब्रिटिश ल्यान्डरोभर जिपहरु अत्यन्त बलिया गाडीमा पर्छन् ।
घाम विस्तारै गाउँ वस्ति पाखा पखेरा छाडेर हिमालका चुचुरातिर उक्लिँदैछ । म सिमभंज्याङ्गको उक्कालोमा बाइकका दुईटा कान पक्डेर चढ्दैछु अनि घुटघुट बाइकको आवाज जंगलतिर हराउँछ म गीतमा गजलमा हराउँछु यसरी एउटा गजलमा-
"खुदाका शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम
शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम ।"
-शेख आलम आवुआला
चिसो ठाउँ चिसा साँझहरु पिउनेहरुका निम्ति उपयुक्त वातावराण हुन्छ यसैले यतिखेर म ती पियक्कड हरिभक्त कटुवाललाई सम्झिन्छु -
"सपना बोकेर आइदिने रातहरुलाई एउटा सलाम
सजिलैसित जिउँने एउटा मीठा निहँ पाइएको छ
रक्सी बनाइदिने पहिलो स्रष्टालाई अर्को सलाम"
सिमभंज्याङ्ग साँझलाई ओढ्ने तयारीमा देख्छु । डाँडाको टुप्पोमा अवस्थित नेपाल दूरभाषको अजङ्गको फलामे लिङ्गो छाता ओढेर ठडिएकै छ । सिमभंज्याङ्गबाट ओरालो झरेपछि हिमालहरु ओझेल पर्छन् । मधेशको फाँट लमतन्न सुतेको देखिन्छ । लहरै ठडिएका पारिपट्टिका हिमाल छाडेर म अब अर्काे कुइनेटोमा बतासिन्छु ।
ओरालोमा बाइक हुत्तिन्छ । केही तल पुगेपछि यी कालापत्थर लाग्ने चट्टानहरुको तस्विर खिच्छु । मकवानपूरको भित्रि मधेसको भागलाइ कुहिरोले छोपेको छ । सेता बादलका डल्लाहरु कपासको खात जस्तै देखिन्छन् । सिमभंज्याङ्गलाई कुहिरोले छोपेको छैन । एक किलोमिटर तलदेखि कुहिरो माथि माथि दगुर्दैछ मेरो बाइक भन्दा धेरै तिब्र गतिमा । म कुहिरोसँग एकाकार हुने प्रयासमा बत्तिन्छु । बाइक कुदाउँछु । गीतले कानलाई स्पर्श गरिरहेछन् । नारायण गोपालदेखि अनिलिसं सम्मले मन्नाडे तलत महेमुद देखि मुकेस हुँदै वर्तमानका भारतीय पप गायकहरु अदनान सहानीसम्म । महेन्द्र कपुरको यो श्वरले जीवनभर पछ्याइरहेको छ मलाई ।
"तुम अगर साथ देनेका वादा करो……।"
यतिखेर भने पातलो कुहिरोले मलाई बिन्दाससँग लखेटीरहेछ म भागीरहेछु बाइकले साथ दिईरहेको छ । माइलस्टोनमा पढ्दै जान्छु ूलामीडाँडा- १८ कि।मि।ू
'लामीडाँडा- १६ कि.मी.
'लामीडाँडा- १५ कि.मि.
अघोरमा केही घरहरु छन् । झीरघारीको छेऊमा पसलहरु छन् । दुई चारवटा पसल । एक दुईवटा घर छन् जहाँ चियासम्म पिउन पाइन्छ । जंगलको बीच बीचैबाट सडक बनाईएको छ । बस्तीहरु सडक भन्दा धेरै टाढा छन् । त्यहाँसम्म पुग्ने सहायक मार्गहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् यसर्थ गाउँले जनजीवन कष्टकर छ अझै पनि ।
सूर्य रातो डल्लोमा परिवर्तन भइरहेछन् पश्चिमतर्फ गोधूलीमा केही घरका छानाबाट निस्केको धूवाँले साँझको र विस्तारै रातको संकेत गरिरहेछ । म जंगलको बीचबाट बत्ती रहेकोछु हेटौंडासम्म ओरालो नै झर्नुपर्छ । बाइकले अहिलेसम्म धोका दिएको छैन नदेओस् भन्ने कामना गर्छु मनमनै । जंगलबाट झ्याउँकिरीको चिरविर सुन्छु । एकप्रकारको आनन्दानुभूति हुन्छ । चिसोले पटक पटक लघुसङ्का गर्न बाध्य पार्छ । औंलाहरु चिसोले कठ्याङ्ग्रिन्छन् पंजाले पनि उति सारो काम गर्दैन ।
चुनियाँको सल्लाघारी पनि अँधेरोमा बेरिन खोजेजस्तो देखिन्छ । बाइकले बत्ति माग्छ म स्वीच थिच्छु मेरो अघिल्तिर पुतली र किराहरु सल्बलाउँछन् । बाइकको हेडलाईटमा ठोकिएर ज्यान उत्संर्ग गर्ने पुतली र किराहरुलाई म समवेदना मात्र व्यक्त गर्न सकुँला बचाउँन सक्दिन मेरो बाध्यता ।
कुलेखानीको दोश्रो प्रकाशगृह भैंसे उजेलोमा आकर्षक देखिन्छ । भैंसेको पुल तरेपछि लाग्यो अब हेटौंडा दश पन्ध्र मिनेटमा पुगिन्छ ।
तेसा्रे बाटो । विस्तारै बुलबुलेको पहिरो छिचोल्छु भित्ताको मीराको होटेल अघिल्तिर सदाझैँ बाइकहरुको घुँइचो छ । हेटौंडा र वीरगंजदेखि रक्सी र खाजा खान आउने मानिसहरुको भीड । मीराको आमाले आत्मीयतापूर्वक मलाई खुवाएको सिस्नो र भात कहिल्यै बिसर्िन सक्दिँन । उनीहरु अत्यन्त आत्मीय छन् । सफा टेबुल र कुसर्ी । अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खुवाउँछन् सेवा गर्छन् । उनीहरुको आतिथ्यले सबैलाई बसौँ बसौँ खाउँ खाउँ लाग्छ । त्रिखण्डीको मोड काटेर बागझोरा पुग्दा शिव ब. थापा सुपरभाइजरको घरमा बलेको लाल्टिनको उजेलो देखेर लाग्यो कुलेखानी तेश्रो जलबिद्युत परियोजना तयार हुँदा त उसको छाप्रामा एउटा बल्ब बल्ला कि किनभने यो परियोजना उसैको घर आँगनमा बन्दैथियो र यो कर्मशील शीव बहादुर थापा पनि मेरो मस्तिष्कमा बसिरहेको सोझो इमान्दार पात्र पनि हो ।
सुपारीटार सामरी चौकीटोल हुँदै राप्ती रोडको मेरो निवासमा पुग्दा सिङ्गो हेटौंडा बजार विजुलीविहिन अन्धकारमा सुत्ने प्रयत्न गर्दै थियो म पनि बाइक आँगनमा अड्याएर त्यसैगरी बिन्दास मस्त भएँ ।